Taleefan: +86898 66553777
Kalluunka Kalluunka Collagen Peptide
Kalluunka Tilapia Collagen Peptide
Peptide -ka qajaarka badda
Peptide -ka Soybean
Budada Dragon Fruit
Powder Goord qadhaadh
Sida loo kala saaro tayada budada kolajka peptide
Markaan sii gabowno, kollajin ayaa si tartiib tartiib ah u lumi doonta, taas oo keenta in kolajka peptides iyo shabagyada laastikada ah ee taageera maqaarka inay jabaan, oo nudaha maqaarku wuxuu noqon doonaa oksayd, atrophy, burbur, iyo engejin, laalaab iyo furfurnaan ayaa dhici doonta. Sidaa darteed, kaabista kolajka peptide waa hab wanaagsan oo looga hortago gabowga ...
Waa maxay sababta kolajka peptide uu u hagaajin karo xasaanadda aadanaha?
Horumar degdeg ah oo sayniska caafimaadka casriga ah, fayraska iyo cudurku waa in la dhimo aragti ahaan, laakiin xaaladda dhabta ahi waxay ku jirtaa aayadda. Sanadihii la soo dhaafay, noocyo noocyo cusub ah ayaa marar badan soo ifbaxay sida SARS, Ebola, oo si joogto ah u dhaawacay caafimaadka dadka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira ...
Shaqada peptide firfircoon oo kelli ah
1. Waa maxay sababta peptide u hagaajin karto qaabdhismeedka ururada xiidmaha iyo shaqada nuugista? Khibradaha qaarkood waxay muujinayaan in peptide molecular yar ay kordhin karto dhererka villi mindhicirka waxayna ku dari kartaa aagga nuugista xuubka mindhicirka si kor loogu qaado horumarinta qanjidhada mindhicirka yar iyo sidoo kale i ...
Alaabooyinka Daryeelka Caafimaadka ee Huayan Collagen
May 29, 2021, Mr. Guo Hongxing, oo ah guddoomiyaha Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd., iyo Mr. Shi Shaobin, oo ah aasaasaha Guangdong Beiying Fund Management Co., Ltd., Waxay yeesheen kulan ganacsi si ay uga wada hadlaan iskaashiga caafimaad warshadaha si loo horumariyo qaab cusub. Guangdong Beiying Fund Managemen ...
Waa maxay sababta loo kabo peptides kalluunka kolajka
Waxaa jira 70% ilaa 80% maqaarka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay kolajka. Haddii loo xisaabiyo miisaanka celceliska haweeney qaangaar ah oo ah 53 kg, kolajka jirka ku jira waa qiyaastii 3 kg, oo u dhiganta miisaanka 6 dhalo oo cabitaan ah. Intaa waxaa dheer, kolajka ayaa sidoo kale ah rukunka dhismaha ee ...
Saamaynta iyo shaqada peptide walnut
Isticmaalka hydrolysis enzymatic hydrolysis complex-biological complex iyo biotechnology kale oo badan si loo farsameeyo iniinta loo yaqaan '' dahabka maskaxda '', laga saaro saliidda xad-dhaafka ah ee looska, si wax ku ool ahna loo sifeeyo nafaqadooda ...
Peptide molecule yar ayaa ah nafaqada ugu muhiimsan caafimaadka qarniga 21aad
Peptides waa walaxda asaasiga ah oo ka kooban dhammaan unugyada jirka aadanaha. Walxaha firfircoon ee jidhka bini'aadamka waxay ku jiraan qaabka peptides, kuwaas oo ah ka -qaybgalayaashu lagama maarmaanka u ah jirka si loo dhammaystiro waxqabadyada nafsaaniga ah ee adag ee kala duwan. Peptides waxaa badanaa lagu sheegaa qarnigii 21aad, taxane ...
Saamaynta dhaqancelinta ee peptide ee ragga BPH
Dad badan ayaa shaqeeya saacadaha dheeraadka ah, soo daaha, cabbista iyo is dhexgalka bulshada, iyo sidoo kale maqnaansho la'aan, sidoo kale waxay fadhiyaan xafiiska muddo dheer, taas oo ka dhigaysa BPH inay leedahay isbeddel dhallinyaro. BPH aad bay u badan tahay, ma taqaan sida ay u keento? Dhiig -karka 'Prostatic Hyperplasia' (halkan ka dib markii loogu yeero BPH) waa cudur caadi ahaan caadi ah ...
Shaqada iyo adeegsiga peptide bovine
Qaado lafo bovine cusub oo leh badbaado iyo wasakheyn lacag la'aan ah alaab ceeriin ah, oo isticmaal tikniyoolajiyadda firfircoonaanta pankretin ee horumarsan iyo tikniyoolajiyadda daaweynta cusbada-yar, borotiinka molecular-ka ayaa si enzim ahaan loogu dhajiyaa peptide collagen oo daahirsan oo leh culeys kelli ah, milmi kara oo si fudud u nuugi kara ...
Miyaad taqaanaa muhiimadda ay leedahay peptide firfircoon oo kelli ah?
Si aad daacad u noqoto, dadku ma noolaan karaan haddii aan lahayn peptide. Dhammaan dhibaatooyinkeena caafimaad qaba waxaa sabab u ah la'aanta peptides. Si kastaba ha noqotee, horumarka deg -degga ah ee sayniska iyo teknolojiyadda, dadku si tartiib tartiib ah ayey u ogaadaan muhiimadda peptide. Sidaa darteed, Peptide waxay dadka ka dhigi kartaa kuwo caafimaad qaba, oo ...
Xiriirka ka dhexeeya peptide iyo difaac
Maadada peptide -ka oo ku yar jirka ayaa sababi doonta difaac yar, oo ay fududahay in la qaadsiiyo, iyo sidoo kale dhimashada sare. Si kastaba ha noqotee, horumarka degdegga ah ee tallaalka casriga ah, dadku waxay si tartiib tartiib ah u ogaadeen xiriirka ka dhexeeya nafaqada peptide iyo xasaanadda. Inta aan ognahay, nafaqo -xumada peptide -ka ee ...
Maxaan ugu baahan nahay peptides mar walba?
Maaddaama ay tahay walax firfircoon oo nolosha lagu hayo, peptides -ku waxay qayb muhiim ah ka qaataan kaabista unugyada nafaqooyinka, sidaa darteed waa lagama maarmaan inaan annagu siino peptide. Jidhka laftiisu wuxuu qarin karaa qaar ka mid ah peptides firfircoon, si kastaba ha noqotee, da 'kala duwan iyo xaalado kala duwan, waxaa jira peptides kala duwan ayaa se ...
No.12 Meifeng Road, mei'an Science Oo Technology New Town, Haikou National High-tech Zone, Haikou City, Gobolka Hainan, Shiinaha.
Xuquuqda daabacaadda - 2010-20220: Dhammaan Reserved Rights.